Android kana iOS: Ndeipi yekusarudza? | IPhone nhau
Android kana iOS. iOS kana Android. Uyu unoratidzika kunge mubvunzo watinayo nguva dzese dzatinoda kumutsiridza yedu smartphone. Mamwe masystem anoshanda haaratidzike senge sarudzo kana tikafunga kuti pakati pemasisitimu eApple neGoogle anopfuura iwo 96% yemugove wemusika pasi rose. Ose ari maviri makuru mashandiro masisitimu ane hurema uye hunhu hwavo uye izvo zvatinofanira kutsvaga ndezvipi zvakanakira mumwe nemumwe wedu. Muchikamu chino tichaedza bvisa kusahadzika kwekusingaperi Iine chinangwa data asi, sezvaunogona kufungidzira kana ndikanyora iPhone nhasi, chinyorwa chakanyorwa nemumwe munhu anoshandisa uye anoda iOS.
1.1.3 Nguva refu.
2.2.1 Dhigirii repasi rekuchengeteka.
Seye mushandisi weIOS uye wekupedzisira Android mushandisi, ndinofunga chakanakisa chinhu nezveIOS inyaradzo yaanotipa imwe chete system izvo zviri kuitika. Uye zvakare, Apple inoisa zvimwe zvinhu pamaitiro ekushandisa zvese zvinoshanda zvakafananaKusiyana nezvinoitika mu = Android, yega yega application inoshanda neimwe nzira. Semuenzaniso, kuchengetedza kana kugadzirisa pikicha, muIOS isu tinongofanirwa kuisa chigunwe pairi kwechinguva. Kana paine sarudzo, menyu ichaonekwa. Mu Android ini ndaona sarudzo imwechete munzira dzakasiyana zvichienderana nechishandiso chiri mairi, icho kwandiri chiri kuvhiringidza.
Mumwe muenzaniso wekunyaradza uye kureruka ndiyo kamera. Tichabvumirana kuti kamera yeiyo chero iPhone haina kumbobvira yakanakisa pabepa, asi isuwo tinobvumirana kuti nekamera default tinokwanisa kutora mifananidzo yakanaka tisingazive zvakawanda nezvekutora mifananidzo.
Hapana sisitimu yekushandisa iri 100% yakachengeteka. Ndinoda kujekesa izvozvo. Izvo zvakati, zvinomira kufunga kuti MaCybercriminals anotarisana nekuedza kwavo pane anonyanya kushandiswa masisitimu. Hazvingaite zvine musoro kuronga chirongwa chisinga shandiswe, ndosaka Windows (PC) yakagara iri tarisiro yerudzi urwu matsotsi uye, pane masystem emafoni, iOS haisiyo inonyanya kukosheswa.
Uye zvakare, iOS yakavharwa sisitimu iyo kunyangwe isu tinofanirwa kutyora kuchengetedzeka kwayo kuti tigone kuigadzirisa. Izvo zvakanyanya kuvharwa inzira yekushandisa, yakachengeteka is
Nekureba kwenguva refu handireve kuti vanogara kwenguva refu nekuti vakasimba, asi kuti Apple inotivimbisa makore akati wandei ekuvandudzwa. Iyo iPhone 4, iyo yakaburitswa muna 2010, yakagadziriswa kune iOS 7, ichimupa makore mana ekuvandudza. Iyo iPhone 4S ichakwanisa kuisa iOS 9, inova mamwe makore mana. Izvo zvinonetsa kuona kuti mamwe madivayiri anovandudzwa sei kune iyo system inoburitswa makore mana gare gare.
Kuvanzika kwakakosha kuApple uye kunozviratidza pese panowana mukana. Iyo encrypted mameseji iMessage kusvikira iOS 8 kudhinda dhizaini humbowo hwazvo. Ichokwadi kuti Android inoshandisa zvakare kunyorera data kubva kuLollipop, asi inoramba ichishandisa sisitimu inoshanda yeGoogle, kambani (ikozvino chikamu chekambani) iyo inoseta modhi yayo yebhizinesi kushambadziro. Kana iwe usina hanya, ndinokukoka iwe kuti uverenge peji ino.
Chekupedzisira, ndinoda kutaura nezve chimwe chinhu chisingazokoshe kana ukangoshandisa iPhone, asi inova poindi yakanaka kwazvo kana uine piritsi uye komputa kubva kuimba imwechete. Iyo ecosystem inoita kuti zvese zvinyanye kugadzikana kunyangwe zvichikwanisika. MuIOS tinogona kusiya iPhone muimba yekudyira uye gamuchira kufona pane yako Mac. Iwe unogona kunge uchiverenga peji rewebhu pane iyo iPhone, kuvhura iyo iPad uye uine iro rakafanana peji panguva imwecheteyo yakamirira. Zviri nyore kunyaradza.
Kwandiri, chakanakisa chinhu nezve Android ndiyo dzakasiyana. Unogona kusarudza nhare ine dhizaini yatinofarira zvakanyanya, tinogona kusarudza chinongedzo nekamera iri nani, tinogona kusarudza diki modhi kana tinogona kusarudza inozadza imwe. Mu Android isu hatiganhurirwe kune izvo zvinotitaurirwa nekambani. Isu ndisu tinosarudza.
Nepafoni yeApple, isu isu tiri varidzi nemadzishe eiyo terminal. Tinogona kuve "zviri pamutemo" zvakanyanya kana zvishoma, zvakare nekugona isu kuisa mapurogiramu asiri paGoogle Play.
Rumwe rudzi rwerusununguko. Pa Android pane matani e Vanosunungura uye mamwe marudzi ekushandurwa muchitoro chimwe chete chekushandisa, nenzira imwechete iyo muIOS mune yechitatu-bato makiyi kubvira pakauya iOS 8. Zvisinei, muAndroid iwo makhibhodi akange aripo kwenguva yakareba. MuIOS zvakafanira kuti jailbreak ikwanise kugadzirisa iyo system mufananidzo, chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa (sezvazvino).
Chokwadi vazhinji venyu havanzwisise zvandiri kureva. Ndiri kureva kuti tinogona batanidza Android mudziyo kune komputa uye ongorora ako maforodha pasina kuisa chero chinhu. Ichokwadi kuti kana sisitimu ikashandisa fomati yeNTFS, OS X haigone kuiverenga, asi inoenderana neWindows, Linux uye chero Mac ine Tuxera kana Paragon NTFS yakaiswa.
Uyewo, kugovana neiyo Android chishandiso kuri nyore pane iOS. Kunyangwe chiri chokwadi kuti muIOS 8 pane kuwedzera, izvo zvinotibvumidza kutumira faira kubva pane chimwe chikumbiro kuenda kune chimwe, ichokwadi zvakare kuti hatizokwanisa kutumira chero chinhu kuburikidza neBluetooth kana AirDrop kune isiri-Apple chishandiso.
Kana iwe uchivagamuchira, zvakanaka. Kana zvisiri, pane zvakawanda zvirambidzo zvausingazokwanise kutakura. Semuyenzaniso, paIOS hatina emulators paApp Store. Emulators chimwe chinhu icho vazhinji vedu vakatamba arcade michina kubva kuma90's vangade kuve paIOS. Nekudaro, pane Android pane emulators paGoogle Play yemarudzi ese, maumbirwo uye saizi.
Kunyangwe ichokwadi kuti Samsung yakaisa mutengo wakakwira pane yayo Galaxy S6, ichokwadi zvakare kuti iri yega kesi. Kana tichitenga iPhone tinenge tichibhadhara anenge € 200 zvimwe kupfuura pakutenga yakawanda yeiyo Android yepakati-yakakwira renji. Izvo hazvireve rezasi-repakati renji, iro nemutengo weiyo iPhone tinogona kutenga mana kana mashanu mafoni eApple.
Dhigirii repasi rekuchengeteka.
Sekutaura kweGoogle, Android haina kuvakwa kuti ive yakachengeteka, kana isiri kuvhurwa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti zvimwe zvinhu zviitike, senge chishandiso chakaipa chichiita chinhu chayo. Ndiwo mutengo wekuvhura.
Android inogadzirwa kuti ikwanise kusvika kune yakanyanya kuwanda nhamba yezvinobvira zvishandiso. Izvi zvinoita kuti iwe unofanirwa mhanya mumuchina chaiwo. Kuti ikwanise kushanda nemazvo pamidziyo yese, sisitimu yacho inofanirwa kugadzirirwa mudziyo wega wega, uye ichi chinhu chisingaite. Mu = Android pane maitirwo maviri ari kumhanya, isu tinogona kuti imwe ndiyo base uye imwe ndiyo yatinoziva. Ndicho chikonzero madivayiri eApple anoda zvakadaro zvine simba Hardware. Kana iwe wakamboshandisa muchina chaiwo pakombuta iwe unonzwisisa zvandiri kureva. Pamwe "base system" kana iyo "host system" inopedzisira yave neprosesa uye / kana RAM matambudziko uye izvi zvingangoitika pane chinhu cheApple zvakare.
Yakaburitswa zvese zviri pamusoro, usazeze kusiya yako pfungwa mune zvakataurwa. Chii chaunosarudza: Android kana iOS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Android » Android kana iOS: Ndeipi yekusarudza?
Ini ndinoda iOS nekuda kwekureruka kwainako, ini handisi mumwe wevaya vanotumira mamirioni ezvinhu kune vamwe vashandisi, asi ini ndinoishandisa chete kumitambo, ehe, kumitambo, handina basa nezvaunotaura, asi ndizvo Ini ndakasarudza, ndinodawo lollipop futi, zvakanaka, asi ini handichinje iOS kuita Android .. Kunyangwe kana yangu iPhone 6 ichinonoka, ndinofunga kuti mitambo inomhanyisa kwandiri!
Iwo mafungiro andinogovana, kwandiri iOS yave iri yakapusa iripo, zvakare nekuda kwekuchengeteka kwayinounza kwatiri (iyo yandakakuudza kuti ndiri padanho repamusoro rekuchengetedzwa kwemakomputa) uye ndinoda chengetedzo!
Ini ndichangobva kuona vhidhiyo umo vashandisi vakaitwa kuti vatende kuti vakadzidziswa beta yeIOS9 uye munhu wese akafadzwa nezvose maficha, widget nevamwe ... asi yaive yakagadziridzwa Android yakaiswa mukati meiyo iphone, zviri pachena , fan fanboys ichagara ichida apple Chero zvazvinotora Ndatendeukira kune admin uye ndinofara neshanduko! Izvo zvave kupedza kushandisa mari yakawanda uye yakawanda x nhare mbozha gore rega uye iyo yapfuura inova isingachashandi pavanogadzirisa OS.
Chinhu choga chandinosuwa apuro, zviri nani zvakanyanya maererano nekurapwa kwemifananidzo uye gondohwe rakadyiwa.
Izvo ndezve kuva vese heheej asi kana ndichifanira kusarudza imwe, pasina kupokana iOS
Iwo ma4 haazove nemakore mana ekutsigirwa. Uchave uine mashanu kana iwe uchisimudzira kuenda kuIOS 4
Mhoro marcos. Wareva, asi une chokwadi chokwadi, 4. Hatizive kuti icharega riini kuvandudza. Chinhu chine musoro ndechekuti inosvika rinouya zhizha, rinova makore mashanu, asi pane (yakaderera) mukana wekuti ivo vatange iOS 5 vagare ipapo. Kana ndikati makore mashanu, vamwe "vakanaka" vaizondiudza kuti ndisabvisa, saka ndafunga kungwarira mune izvozvi. Zvisinei, ndinoreva 9.1 uye kuverenga, izvo zvina zvakakwirira gare gare, isu tichiri kuona kuti zvinogadziridza sei.
Zvakanaka. Ndakatofunga kuti pfuti dzaizobuda ipapo.
Ini ndanga ndichingo taura nezvazvo nekuti kana iwe uchifunga kuti iyo iPhone 4 yave nemakore mana ekuvandudza kubva kuIOS 4 kuenda kuIOS 4, iine account imwechete iyo 7s ine 4, kubva iOS 5 kusvika iOS 5.
Asi ngatiitei zvese pachena 🙂
Hongu, asi ziva kuti iyo iPhone 4 yakatomira kukwidziridzwa. Yakagadziridzwa kubva 2010 kusvika 2014, ichisvika yazvino vhezheni yeIOS 7. Isu tinoziva kuti iyo iPhone 4s ine makore mana ekuberekwa, asi zvingangove iri 4. Hazvitomboiti zvisingaiti kuti yakagadziridzwa zvakanyanya. Ndokusaka ini ndichinongedzera kunguva yazvino.
Mushure mekuverenga chinyorwa chose, ndinogona kungokukorokotedza, Pablo. Kuverenga kunonakidza uye kunonzwisisika kana iwe usina ruzivo rwakanyanya, inoratidza zvakanakira musiyano uye musiyano weese maOS.
Luis Alfredo akadaro
100 OS XNUMX% ndiyo yakanakisa, yakawanda yekubatanidza pakati pemidziyo ¡OS uye Mac OS X, ine handoff. Iyo yakanakisa dhizaini!
Pindura Luis Alfredo
Ferra Velázquez (@ferrvlqz) akadaro
VESE VARI VAVIRI. Sei uchidaro? Ndine piritsi rakakura reNexus uye yangu yega iPhone, hapana chikonzero chekumira kune imwe chete.
Pindura kuna Fer Velázquez (@ferrvlqz)
Ehe, hazvisi kufamba mushe, asi isu tinofanirwa kufunga kuti iyo 4S inhare kubva muna 2011 ... hapana Android kubva gore iro inoshanda kusvika nhasi neApple L zviri pamutemo.
Ivonne mhondi akadaro
Pindura kuna Ivonne Murdock
Gesù Gam akadaro
Pindura Gesù Gam
Rodney Castillo Reyes akadaro
ios, nekuti Android inoshandisa yakawanda RAM uye inogadzira akawanda maforodha.
Pindura Rodney Castillo Reyes
Andres Betancourth akadaro
Pindura Andres Betancourth
iOS zvirokwazvo. Ndisati ndatenga Android ndinowana Nokia Lumia.
Salvador Montes de Oca akadaro
Izvo hazvina chekuita nazvo kuva apuro peji uye ivo vanobvunza iwo mubvunzo uye zvechokwadi iOS iri pamusoro pamusoro peiyo Android kana paine zvechokwadi isina kuchengetedzeka system iri Android izere isina basa uye yakashata mhando zvirongwa ah izvo kana vari mahara hahahaha
Pindura Salvador Montes de Oca
Ndaneta nevanhu vanoti avo vane Android ndeyekuti havana mari, kozoti avo vane Galaxy S6 chii. Panyaya yekuvandudza rutsigiro, zvakakosha kuti iyo iPhone 4s ine rutsigiro rwemakore mashanu, nepo yangu Nexus 5 ya4 iri 2012, asi pane musiyano uye ndiko kuti iyo iPhone inoenda kuburikidza neshanduro shanu dzakasiyana (iOS 3, 5, 5 , 6 ne7) mumakore mashanu uye iyo Nexus 8 inoenda kuburikidza neshanduro shanu dzakasiyana (9, 5, 4, 5 uye 4.2) mumakore matatu chete. Ndiri kutaura nezveNexus, ichokwadi zvakare kuti kune vagadziri vakaita saSamsung kuti yavo yekuvandudza rutsigiro fudge. Uye kuti iwe unoziva kuti neshanduro yega yega yandinoita kune yangu iPhone 4.3 ndinozviona zvichinonoka, ndinoda kuva nazvo zvakare neIOS 4.4; nepo yangu Nexus 5.0 ine yega yega yekuvandudza ichienda zvirinani, uye kana zvikatowedzera ini ndinogona kudzikisira kune yapfuura vhezheni pese pandinenge ndoda.
Michelle Alvarez anochengeta mufananidzo akadaro
Pindura kuna Michelle Alvarez
"Kana ichivharika zvakanyanya sisitimu yekushandisa, ndipo painonyanya kuchengetedzeka."
Pindura kuna SalvaG